भारतलाई चीनको चेतावनी | My News Nepal
२०७४ भदौ ७ गते
काठमाडौं चीन र भुटानको सीमा क्षेत्र डोक्लाममा रहेका सेना नहटाएको भन्दै भारतसँग असन्तुष्ट देखाउँदै आएको चीनले पुनः भारतलाई चेतावनी दिएको छ। चीनले मंगलबार ‘हाम्रो सेना भारत घुस्यो भने उथलपुथल मच्चन्छ।’ भन्दै चेतावनी दिएको हो । चीनको विदेश विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यदी हामीले पनि भारतले जस्तै सीमानामा बनेका पूर्वाधार बेइजिङका लागि खतरापूर्ण छन् भन्ने बहाना बनाएर भारतमा छिर्‍यौं भने हंगामा मच्चिन्छ ।
डोक्लाममा चीनले सडक बनाउँदा नयाँ दिल्लीलाई खतरा छ भन्ने भारतको तर्क बेतुकको र निन्दनीय छ।’ गत जुन १६ तारिखदेखि डोक्लाम सेक्टरमा भारत र चीनबीच सीमा विवाद बढेको छ। चीनले डोक्लाम क्षेत्र आफ्नो भएका कारण यस क्षेत्रबाट भारतले सेना नहटाएसम्म वार्ताको कुनै संभावना नरहेको बताउँदै आएको छ। चीनको विदेश विभागले निकालेको पछिल्लो विज्ञप्तिमा आफ्नो सम्प्रभुता जोगाउने मामिलामा चीन सजग रहेको बताइएको छ। ‘चीनलाई कुनै व्यक्ति तथा राष्ट्रको अतिक्रमण सह्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतीय सेनाले गैरकानूनी तरिकाबाट सीमा उल्लंघन गरेको चीनको आरोप छ।
१६ जुनमा भारतीय सेना डोकलाम क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि सुरु भएको यो विवाद पछिल्लो ३० वर्षयता भारत र चीनबीच देखिएको सबैभन्दा ठूलो सीमा विवाद हो। १९८७ मा अरुणान्चल प्रदेशको चू घाटीमा पनि दुई देशका सेनाहरुबीच यस्तै लामो विवाद चलेको थियो। चीनको जनमुक्ति सेना (पीएलए) ले सीमा विवादकै दौरान यस क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको छ। पछिल्ला ४५ दिनमा चीनले दोस्रो पटक विवादित क्षेत्रमा अभ्यास गरेको हो। चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका अनुसार यस सैन्य अभ्यासमा पीएलएका १० युनिट सहभागि थिए। यसमा उड्डयन यूनिट तथा सैन्या दस्ता समेत सहभागि थिए।
चीनले यस अभ्यासको ५ मिनेटको भिडियो पनि सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि चीनले तिब्बतमा पनि यस्तै अभ्यास गरेको थियो। चीनको एक पत्रिकार द लियान्हे जाओबाओले पीएलएले भारतलाई तर्साउने उद्देश्य राखेर अभ्यास रहेको समाचार छापेको छ। भारत र चीनका सेना डोक्लाममा आमने–सामने बसेको २ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ। विवादको पहिलो कारण चीनले डोक्लाम सेक्टरमा बनाएको सडक हो। यस इलाकामा चीन र भूटानको सिमाना छ। भारतको सिक्किम पनि यही जोडिन्छ। त्यसैले भारत र भूटानको आरोप छ कि चीनले भूटानको सीमाना मिचेर सडक बनाउन सुरु गरेको छ। चीन यस कुरालाई मान्न तयार छैन। उसले नियम विपरीत भारतीय सेना आफ्नो भूभागमा छिरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। – एजेन्सीको सहयोगमा
१० वर्षे कान्छोसँग प्रियंकाको आफेयर ?
२०७५ जेष्ठ १८ गते
प्रहरी कार्यालयको क्यान्टिनमा हवल्दार पत्नीको शव, हत्या कि आत्महत्या ?
Implementation of minimum wages for working journalists stressed
२०७५ बैशाख २४ गते